Sangana nezvido zvako zvekucheka nekukurumidza
Mafomu: yekushandisa patafura saha, machena muchina kutema machena uye girenayiti
Chigadzirwa chigadzirwa: Laser welded
Giredhi remhando: mureza
Kucheka kwe: girenayiti, machena, bluestone uye sandstone. Inokodzera mhando zhinji dzekucheka michina, senge infrared yekucheka michina, ruoko-cranked yekucheka michina.
(1) Yakakwira-mhando substrate, dhizaini dhizaini dhizaini: iko kushandiswa kwepamusoro-soro-simba substrate, yakasimba simba, yakasimba kuomarara; kunetsekana mutsetse dhizaini, yunifomu kugoverwa kugadzirisa iko kushomeka kwekushushikana kwekushushikana, nokudaro nekuvandudza hupenyu hwebasa nekusimba kweiyo reza reza.
(2) Carbide cutter musoro: sarudza yenyika yepamberi yekumanikidza sintering maitiro, kugadzirisa simba remutemi musoro, chero uye nekupfeka kuramba kwetekinoroji inotungamira, kusangana nekuenderera, kwepamusoro tembiricha chip zvinodiwa.
(3) Zvakasimba zvakasungwa: iyo chiwanikwa chidimbu chakanyatso sungwa kune iyo substrate, hazvisi nyore kurasikirwa nemazino, hapana chipping chiitiko, uye zvinobudirira kudzivirira iyo substrate kubva deformation; zvikuru
uye zvinobudirira kudzivirira substrate kubva mukushanduka; yakadzikama kwazvo substrate yekuona inoshanda kudzikisira kwekuzungunusa kana uchishanda.
(4) Yakakwenenzverwa pamusoro: yakanaka uye inoyevedza, isiri nyore kuita ngura, inopenya uye inogara.
Mafomu: Yekucheka Marble
Feature: Yakasarudzika / Yakanyarara simbi simbi
Mafomu: Zvekucheka Granite
Feature: Standard / Yakanyarara simbi cor
(1) Anoshanda anofanira kupfeka magogorosi, dziviriro kumeso, hovhorosi, shangu dzekudzivirira, magurovhosi nezvimwe.
(2) Saha reza rinofanira kuiswa zvine mutsindo munzira yekutenderera sezvakaratidzwa, uye harifanirwe kushanda rakatarisana.
(3) Kana uchicheka wakaoma, usacheke uchienderera kwenguva yakareba, nekuti izvi zvinogona kukanganisa hupenyu hwesaha reza uye yekucheka mhedzisiro. Kana uchicheka nyoro, wedzera mvura. Usateme macurves, shandisa yakakosha yekucheka blade kune makakombama.
(4) Zvinorambidzwa kushandisa ekucheka mashizha ekugadzira sanding. For sanding, ndapota shandisa nyanzvi hasha mashizha.
(5) Yambiro: Kukundikana kushandisa jeko resaha rekucheka mashandiro zvinoenderana nezvinodiwa zvinogona kukonzera kukuvara kukuru.
Pashure: Rusvingo Rwakaona Nereza
Zvadaro: Vacuum Brazed Diamond Yakaona Nereza
Kuramba Diamond Vakaona reza
Yakakamurwa Turbo Diamond Yakaona Nereza
Super Yakaonda Turbo Daimondi Yakaona Nereza
Wet-kucheka Kuenderera Rim Diamond Vakaona Nereza